Tallulah Bangladesh: Cilaaqaadka Jilaaga iyo TV-ga
Taariikhda & Dhaqanka Tirooyinka Muhiimka ah
Tallulah Bankhead wuxuu ahaa actress abaal-marin ah. Waxay calaamad u taagan tahay marxaladda iyo shaashadda, oo loo yaqaan shakhsiyadeeda, dabeecadeeda, iyo codka qoto dheer. Waxay ku nooshahay Jannaayo 31, 1902 - Diisambar 12, 1968. Waxa kale oo ay ahayd marti-gelin riwaayadeed oo caan ah iyo marti-geliyaha telefishanka.
"Haddii aan noloshayda ku noolaan lahaa mar kale, waxaan sameeyn lahaa qaladaadkaas isla markiiba."
Tallulah Banghead wuxuu ku dhashay Alabama, oo ah gabar ka tirsan Congressman William Bankhead (oo ah Afhayeenkii Aqalka Baarlamaanka, 1936-40).
Hooyadeed ayaa u dhimatay dhibaatooyin ka timid dhalmo dhowr toddobaad ka dib, iyada oo qayb ahaan ay kor u qaadday adeerkeed iyo awoowe. Waxaa loo magacaabay Tallulah for ayeeyeed, kaas oo loogu magac daray dhir, Tallulah Falls, Georgia. Waxay wax ku baratay New York City, Staunton, Virginia iyo Washington, DC. Shakhsiyadeeda sawiristeeda waxay ka muuqatay da 'yar.
Tallulah Banghead ee ugu horreysay ee filimka wuxuu ahaa 1917kii iyo kaalinteedii ugu horreysay ee 1918-kii. Ka dib doorashooyin yar yar ee filimka iyo marxaladda, waxay tagtay England 1923, halkaas oo ay caan ku noqotay shakhsiyadeeda iyo codka qotoda dheer caan ku ah lixda ciyaarood ee ay ka muuqatay.
Tallulah Bankhead wuxuu ku laabtay Maraykanka sanadkii 1931-kii, isagoo ku biiray New York, 1933-kii, halkaasoo lagu ogaaday oo loo daweeyey qaliin loogu talagalay gonorrhea. Tallulah Bankhead ayaa markaa dib ugu soo laabtay marxaladda New York ee Meel Wanaagga, Roobka, Qosolka Guud iyo Fikradda la Sheegay.
Filimkeedii 1937, Antony iyo Cleopatra, ayaa loo tixgeliyey inuu yahay boodh cad.
Sanadkii 1939-dii, waxay heshay abaalmarin ay hawsheeda uga heshay The Little Foxes by Lillian Helman, iyo 1942 waxay ku guuleysatey abaalmarin ay ku muujisay waxqabadka ay ku leedahay Maqaarka Maqaarka. Waxqabadka filimkeeda Hitchcock's Lifeboat ee 1944 wuxuu ku guuleystay abaalmarino badan; 1948 waxay ku dhalatay Otto Preminger ee Royal Scandal iyo 1948 waxay ku ciyaaraysay marxaladda Naadiyada Gaarka ah ee Noel Coward.
Tallulah Banganku wuxuu ka fariistay marxaladdii 1950, isagoo bilaabay raadiyaha raadiyaha leh marti sharaf badan. Sannadkii 1952, waxay martigelisay bandhig talefishin ah oo ay daabacday buug-yaraheeda. Waxay ka soo muuqatay Steve Allen iyo bandhigyada TV-ga Lucille Ball oo ay ku ciyaarayeen fiidiyoow habeenkii lagu ciyaaro Las Vegas.
Dhowr isku day ah dib u soo nooleeynta mihnadeeda maadama ay ku guuldareysatay ama ay ku guuldareysatay. Hawlgalkeedii ugu dambeeyey wuxuu ahaa on Batman sanadkii 1967.
Tallulah Bankhead Actor Jan Emery oo 1937-guuradii guursatay oo ay is-furteen 1941-dii. Kadib guusheedii 1942, waxay gurigeeda ku iibsatay miyiga New York halkaas oo ay si joogto ah u soo dhaweeyeen. Estelle Winwood iyo Patsy Kelly ayaa ka mid ahaa martida la degganaa halkaas.
Kuwo badan baa waydiisanayaan in Tallulah uu ahaa haweentiisa. Waxaa hubaal ah, inay galmo iyo xiriir la yeelatay haweenka, iyo sidoo kale ragga. Magaceeda waxaa lala xiriiriyay inta lagu guda jiro nolosheeda dad badan - ragga iyo dumarka - waxayna si taxadar leh u kobcisay sumcadeeda duurjoogta ah. Waxaa sidoo kale loo yaqaanaa isticmaalka kookaynta oo badanaa lagu sheego in ay samaysay.
Tallulah Bankhead wuxuu ahaa mid firfircoon siyaasadda, taageeraya Dimoqraadiyadda iyo Dimuqraadiyada iyo ololeynta Franklin D. Roosevelt. Waxay gacan ka gaysatay in ay ururiso dhaqaale loogu talagalay gargaarka dagaalka iyo dadaalka dagaal ee inta lagu jiro dagaalkii labaad ee aduunka.
Waxay sidoo kale taageertay kooxda New York Giants.
Su'aalaha Inta Badan
Xagee ayuu magaca "Tallulah" ka yimid?
Waxaa loo magacaabay Tallulah for ayeeyeed, kaas oo loogu magac daray dhir, Tallulah Falls, Georgia.
Talulah Banganku ma ahaa haweentiisa?
Haddii su'aashu tahay "Miyuu kufsadey iyo xiriirka haweenka?" markaa jawaabtu waa shaki la'aan. Waxay sidoo kale la xiriirtay rag iyo dumar badan.
Tallulah Bankhead ma isticmaalay kookayn?
Haa, waxay badanaa sheegtey in ay qabatay.
Bret, David. Tallulah Bankhead: Nolol Dhibaato ah
Brian, Denis. Tallulah, Darling: A Dabeecada Talulaha Bangiga
Qodobbada la xushay
• Qofna ma noqon karo sida aniga oo kale. Xittaa dhib ayaan qabaa.
• Waxaa la iigu yeeray waxyaabo badan, laakiin marnaba garasho.
• Waxaan udubdhexaad u yahay sida loola cararay.
• Waxa kaliya ee aan ka qoomameynayo waqtigaygii waa dhererka.
• Anigu ma ahan kan ugu fiican markaan bilaabayo niyad-jabka ama falsafadda. Moodhku waa mid dhib badan, gaar ahaan kuwa aadka u isticmaala.
• Waxaan haystaa saddex phobias, oo, waan karri karaa, noloshayduna waxay noqonaysaa mid aan la mid ah sida sonnet, laakiin sida caajis ah sida biyaha daadsan: Waan necbahay inaan sariirta tago, waan necbahay inaan kor u qaado, oo waxaan necbahay inaan keligaa noqdo.
• Waxaan si buuxda u hagaagsanahay hamiga. Haddii aan jeclaan lahaa in wax kasta oo adduunka ka mid ah ay noqoto mid xor ah.
• Waxaan aqriyaa Shakespeare iyo Kitaabka Quduuska ah, anigana waan jili karaa. Taasi waa waxa aan ugu yeedhayo waxbarasho xor ah.
• Waxa aan sameeyay wixii aan awoodey inaan ku dhufto ra'yiga aan ku socdo si aan ugu tago. Waxa aan ku socdo habka aan u socdo, heer kasta oo xisaabeed oo loo yaqaano nin, wuxuu ahaa qalad la'aan, iyadoo loo marayo madadaalo.
• Waa mid ka mid ah jiliciyada naxdinta leh ee masraxa oo kaliya hal qof oo ku jira inuu ku xisaabtami karo shaqo joogto ah - ilaaliyaha habeenkii.
• Haddii aad runtii rabto in aad ka caawiso masraxa Mareykanka, ha ahaato actress, dahling. Noqo qof dhagaysta.
• Ha ku qaadin guf oo dadka naqdiya ay dilayaan masraxa. Caadi ahaan waxay ku gartaan dhinaca geeska. Badanaa waxay siiyaan ducadooda qashinka.
• Telefishinka wuxuu adeegsan karaa adeeg weyn oo ku saabsan waxbarashada dadweynaha, laakiin ma jiro wax calaamad u ah kafaalad-qaadayaashu waxay leeyihiin wax sidan oo kale ah oo maskaxdooda ah.
• Waxaan u maleynayaa in Jamhuuriyadda Jamhuuriga ahi ay tahay in la dhigo qalajiyo iyo hanti-gooyooyinka laga xaaqay hooskiisa.
• Anigu waan iman doonaa, oo jacayl ayaan idin siin doonaa saacadda shanaad. Haddii aan soo daaho aniga la'aanteyda.
• Waa gabdhaha wanaagsan ee haysta xafladaha; gabdhaha xun weligood ma laha.
• Halkan waa sharci aan kugula taliyo: Marna ha ku tababarin labo marar.
Dagaalkii Dunida II: Marshal Walter Model
Ruby Bridges: Hero 6-Sano Dhaqdhaqaaqa Xuquuqda Rayidka
Anna Comnena, Mataanaha taariikhiga ah iyo Byzantine Princess
Dagaalkii Dunida II: Colonel Gregory "Pappy" Boyington
Yaa Suxufiyiin ah?
Maxaad Sameyn Kartaa Haddi Aad Hayso Lahayda Guriga Dira
Dagaalkii sokeeye ee Suuriya
Jaamacada Utah GPA, SAT iyo ACT Data
Gaadiidka leh Qiimaha ugu fiican
Qeexitaanka Oxyacid iyo Tusaalooyin
Madaxweyne Bashar al Assad
Tixgeli Beerto Geedka Cagaaran
Cirridka Wareerka Cagaarsho - Aqoonsiga iyo Xakamaynta
Balaam - Pagan Seer iyo Magician
Hantidhawrka Gawaarida Gawaarida
Jaamacadda Tampa ee Is-qorista
"Aqoonsiga Dio shudus" Lyrics iyo Text Translation
Yaa Yeelay Diiwaanka Koontada?
"Halkaas waxaa jira" Song
Talo-tallaabo tallaabo ah oo loogu talagalay in lagu sameeyo qoob-ka-cayaarka qoob-ka-cayaarka
Baro sida loo kala soocayo Noocyada kala duwan ee Noocyada
13 Isku-buuqsanaan 'Gray's Anatomy'
Shabakadda Sonnet: Gabayga 14 Lines
Ciyaaraha, Isku-dubarida Xiriirka, iyo Ciyaaraha Ciyaaraha Ciyaaraha
Waa Maxay Dhabarka Barafka?
Hagaha Isticmaalka Soir iyo Soiree ee Faransiis
Waa Maxay 20 Qodobka Koowaad?
Dugsiyada Gaarka ah ee Dallas
Aan Baannidan Waa Dhamaan Run
5 Siyaabaha Wanaagsan ee Barashada Astronomy